by UNigel Mitchell
Umxholo wokuhlola uqhubekile kwi- Star Trek kunye ne-Starship starhip, i- USS Voyager , ithunyelwa kwi-Delta Quadrant yangaphambilini. Uboniso lubonisa umphathi wokuqala wesibini ohamba phambili, u-Kate Mulgrew njengoK Kathryn Janeway. Abalinganiswa bekunzima nokuphawulwa kwempahla kunye nensimu engaqhelekanga njengoko bezama ukubuyela ekhaya. Ngeenkwenkwezi ezisixhenxe, i- Star Trek: Uhambo olusisondeza sisiza abasebenzi abatsha, iinqanawa ezintsha kunye nohambo olusayi kubonwa ngaphambili. Ezi zezi ziqendu ezilishumi ezifanelekileyo.
UJaneway uhlangana noJaneway (Kate Mulgrew). Paramount / CBS
(Inkwenkwezi yesi-2, isiqendu 21) Nangona uzama ukunqanda intsimi yintsimi, uhambo oluhambayo luhlangana ne-time-time rift eyenza i- Voyager . Iinqanawa zombini azikwazi ukuba zikho zombini, kwaye zibangela ukungaphumeleli okusongela zombini. Umzuzu xa iJaneways idibana kunye nokuqwalasela okukhethayo yenye yezona zinto zihamba phambili kwi- Voyager , kwaye isiqhelo sinye esinye isilingo esinokuziphatha.
Udokotela (uRobert Picardo) "uhlola" uJaneway. Paramount / CBS
(Ixesha le-6, isiqendu 4) Xa udokotela we-holographic utshintshile inkqubo yakhe yokumvumela ukuba ahambe, uqala ukuba neengcamango zokuba nguMlawuli okhuselekileyo wenqanawa. Kodwa xa iifuduka zemini ziphuma ekulawuleni, akaqondi ukuba uhlanga olungumntu ongekhoyo luya kwimemori yakhe kwaye ucinga ukuba ukucinga kwakhe kuyinyani. Le ngqungquthela iyintandokazi phakathi kwabalandeli ngenxa yehlazo kunye nokuhlolisiswa kwamathemba kunye namaphupha ogqirha.
Ezisixhenxe kunye noDktor Dance. Paramount / CBS
(Isiqingatha sesi-5, isiqendu 22) Kule ngqungquthela, isixhenxe kunye noDokotela bazama ukuhlola iimvakalelo zothando. Ugqirha unikela ukunceda abaSebenzi bafunde ngokuthandana nokuthandana, kodwa uqala ukuvelisa iimvakalelo kuye. Esi siqhelo sisoloko sicaciswa ngokwengqondo kunye nengqiqo. Iingqungquthela zabalingani ababengabantu abangumntu onzima ukufumana uthando ngenye yezihlandlo ezimnandi kakhulu zokuhamba .
EMH (uRobert Picardo) kunye no-EMH-2 (no-Andy Dick). Paramount / CBS
(Isiqingatha sesi-4, isiqendu 14) Xa abasebenzi be-Voyager bafumana inethiwekhi yomnxibelelwano wobudlelwane, bayayisebenzisa ukuba badlulisele iDokotela we-holographic kwi-Starhip starhip kwi-Alpha Quadrant, i- Prometheus . Kodwa xa efika khona, ugqirha uyifumana ukuba ithathwe yiRomulans. Uqhagamshelana neHlogram yezoNyango yezoNyango ngokukhawuleza ukubuyisela umkhumbi, kwaye uthumele umyalezo kwi Starfleet ukuhlangula uhambo. Yisiqhelo esichukumisayo esivumela uDokotela ukuba abe yiqhawe elilodwa.
Uhambo lokuhamba kunye neDelta Flyer uhamba nge-slipstream. Paramount / CBS
(Isiqingatha sesi-5, isiqendu 6) Xa uhambo luzama ukubuyela kwindawo yeSystem kunye ne-drive yokulinga, kuhamba kakubi. Inqanawa iyaphazamisa, ibulale yonke indawo kwaye ishiya iinqanawa ezitshintshileyo kwihlabathi elimnyama. Kodwa iKhakotay noKim bayabaleka kwaye bafumane umkhombe emva kweminyaka elishumi elinesibini. Bathumela umyalezo emva kwexesha kunye nokusikwa kweeNqununu kunye noncedo lukaDokotela ukugcina iinqanawa. Ndingumntwana osisigxina sexesha elihambahambayo, kwaye kukho umdlalo omninzi kwisigwebo uKim uvakalelwa indima yakhe ekutshatyalaliswa kwe- Voyager . Ukubuya kweGeordi LaForge (ngoku umphathi) ibhonasi ebalulekileyo.
Uhambo oluya kwiplanethi ye-tachyon. Paramount / CBS
(Ixesha le-6, isiqendu se-12) Uhambo oluhambayo lufumana iplanethi enefuthe lokuphucula ixesha, kubangela ukuba kudlule iminyaka kwi-planethi ngelixa imizuzwana iyadlula i-crew. Ukubanjelwa kwindawo yokujikeleza kwiplanethi, abasebenzi be -Voyager bazama ukuphepha xa bekhokela inkolo kunye nesayensi yenkcubeko yonke ekhula phantsi kwayo. Ibali linamazwana malunga nenkolo nenzululwazi, kwaye ngumzekelo obalaseleyo wenzululwazi yezobuxoki kwixesha elifanelekileyo.
U-Tuvix uxela ilungelo lakhe lokuba khona. Paramount / CBS
(Inkwenkwezi yesi-2, isiqendu 24) Konke kubonakale kuqhelekileyo xa u-Tuvok oyintloko kunye nentloko ye-chef Neelix ethunyelwa kwiplanethi engaphandle kunye nezinye iisampula zezityalo. Nangona kunjalo, isityalo sibangela ukuba umthuthi we-transporter afake i-Tuvok ne-Neelix ibe yinto enye. Indlela entsha yokuphila, ebizwa ngokuthi iTuvix, yamkelwa ngabasebenzi kwaye ayibonakali njengento engalunganga nhlobo. Okokude, kude kubekho inkqubo eyafunyanwa ukuba ihlukanise iTuvok neNeelix, ngokutsha isonakalisa iTuvix. Isiqendu sichaphazela imibuzo enzulu malunga nobungqina kunye nokuziphatha ngendlela eqhubekayo ibukisa ababukeli namhlanje.
UCaptain Janeway kunye neCaptain Ransom. Paramount / CBS
(Isiqingatha sesi-5, isiqendu 25; Isiqendu 6. Isiqendu 1) Uhambo luya kubona enye i-Starfleet edibeneyo elahlekileyo kwi-Delta Quadrant, i- USS Equinox . Ngeendlela ezininzi, oku kuhlobo lwe "clone evil" isiqendu, apho i- Equinox yinguqulo embi ye- Voyager . Nangona uhambo luzama ukugcina izinto eziphakamileyo ze-Starfleet, i- Equinox ihlakele ebubini kwimizamo yabo yokubuyela ekhaya. Banoba neHologram yezoNyango eziPhezulu, eneenkqubo zayo zokuziphatha ezikhuselekile ezikhuselekileyo zokubulala amagunya okuphila ukuze kukhishwe amandla. Isiqephu sichaza indlela abantu abonakala balungileyo behla ngayo ebubini ngenxa yokuphelelwa lithemba, okuyiyo namhlanje.
"Ithemba kunye noyiko"
AbaSebenzi abasixhenxe kunye noKaputeni Janeway. Parmount / CBS
(Isiqendu 4, isiqendu 26) Kule ngqungquthela, i- Traveler crew ifumana umyalezo evela kwi-Starfleet, kodwa kunzima ukuyiqonda. Bafumana uncedo kumfokazi obakhokela kwinqanawa esetyenziswe ngokusuka kwi-Starfleet ebenokuyifumana kwakhona kwi-Alpha Quadrant. Kodwa inqanawa iya kufuna ukuyeka ukuhamba , kunye neZisixhenxe zeNtshonkotha zixhamla. Isigqibo sabo sibakhokelela ekufunyaneni okuphazamisayo, kwaye kubangele ukuba baphendule iziphumo zezenzo zabo kwi-Delta Quadrant. Ibali elinamandla ngemibuzo malunga nendlela abahamba ngayo bezama ukulinganisela kwi-Prime Directive kunye nomnqweno wabo wokubuyela ekhaya.
I-Janeway idibanisa amagosa e-bridge ephihliweyo. Paramount / CBS
(Isiqendu se-4, iziqendu 8, 9) Kule ngqungquthela emibini, umlawuli wamanye amazwe uzama ukusebenzisa isikhali esisekelwe kwixesha ukuguqula umlando ukuthanda kwakhe. Yenza iintlobo zakhe zomelele xa zenza iintshaba zayo zibe buthathaka. Uhambo luya kubanjwa ngexesha elihlala liguqukayo, apho imeko yabo iqhubeka ngakumbi ngakumbi xa intshaba yabo ikhula ngamandla nangakumbi. Eli qhekeza libonisa uhambo oluhamba phambili kwixesha elimnyama kunye nokuchitha izixhobo, inqanawa yokuqhaqhafaza, kunye nokhetho lokunciphisa. Ngeendlela ezininzi, sisiqhelo esifeza isithembiso sokuqala senkwenkwezi yeFirmation elahlekile kwaye ilahleke.
"I-Star Trek: Travel" yayingumzekelo owazisa umoya wokuhlola kunye nokungaziwa kwi-franchise. Jabulela ezi ziqendu okokuqala okanye kwakhona.
Fumana iiTikiti ze "Ixabiso lilungile"
Iindlela ezili-10 ezilula zokunceda ubomi boLwandle
Amalungiselelo eNgingqi - Ngaphakathi / Kwangaphakathi / Nge-On / Onto / Out of
Xa uGanga Wazalwa
Ukudala Iimpawu Zomeleleyo (kwi-Run-Time)
Naruto Anime Anime Movies DVD kunye ne-Blu-ray Cover Gallery